Version 1.0.3 – Nahoana ianareo no tsy mandefa hafatra aho?
Aogositra 5, 2018 amin'ny tolotra Leave a Comment
Faly izahay manambara ny vaovao dikan, navoaka omaly.
Io dikan-dia rehetra momba ny endri-javatra namany Sary, ary fandikan-teny olombelona fanatsarana ny fitantanana.
Ny namany Sary endri-javatra dia hanampy ny Admin mba fampahatsiahivana amin'ny olombelona fandikan-teny natao tamin'ny toerana, ao amin'ny dikan-maimaim-poana ianao, dia hahazo ny hafatra raha vao toy ny fandikan-teny vaovao no namoaka. Ao amin'ny Full Version ianareo koa mba manana ny safidy mba hamela ny hafatra mba buffer (mba hahazo iray mpampiasa hafatra taorian'ny efa nandika ny sasany kofehy eo amin'ny toerana). Hianao koa manana ny safidy handray ny isan'andro ny vaovao Digest teny natao tamin'ny toerana. Azonao atao ihany koa ny mifidy ny adiresy ireo hafatra ho nalefa tany, avelao fotsiny banga ny mpandrindra ny mailaka.
Endri-javatra iray hafa izay nihatsara izany dikan-dia ny fandikan-teny backend tonian-dahatsoratra, raha mbola tsy mamela anareo ho tena handika ny backend, izao dia afaka hitantana ny fandikan-teny mora foana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fanivanana mampiavaka izay nanampy sy ny ankamaroan'ny zavatra izay tena miasa ankehitriny. 🙂
Tsy andrintsika ny mihaino ny inputs, ary Manantena izahay fa hahazo izany famotsorana vaovao
Nametraka Under: General Messages, Release filazana, Software Updates
Version 1.0.2 – Lazao amiko izay misy anao avy ary Izaho hanao…
Jolay 22, 2018 amin'ny tolotra 2 Comments
Io dikan-manampy ny fanohanany an'i Geographic IP miorina mamantatra izay efa nangataka ny endri-javatra ho an'ny taona vitsivitsy farany (Rehefa nitondra ny dinos).
Ahoana no olona afaka ny fanohanana ny mamantatra izany? Tsy miantehitra amin'ny GeoIP ny tena tsara Detection plugin amin'ny yellowtree.de. Taorian'ny fametrahana sy activating fa Plugin ny safidy dia hita ao amin'ny toe-javatra etsy ambany fotsiny ny ACCEPT_LANGUAGES lohapejy mifototra mamantatra. Interface tsara ny nohatsaraina koa haneho anao ny no ho vokany ho an'ny manokana ianao ho tratra rehefa miditra ny fitantanana tontonana.
Vao mainka manazava, mihevitra ho manana ny toerana voasoratra amin'ny teny Anglisy sy manana ny fanohanany an'i Espaniola. Mpampiasa iray fitsidihana avy any Espaina, ny teny dia niova an'i Espaniola (Fifandraisana voalohany ny fivoriana). Raha misy mpampiasa nitsidika avy tany Alemaina ilay fiteny na dia hita ho alemà satria ny teny dia tsy afaka ny toerana dia redirect ny toerana misy anao kinova.
Rehefa safidy dia samy afaka, ny ACCEPT_LANGUAGES haka tiana.
Ny endri-javatra dia nanohana na eo amin'ny maimaim-poana sy ny Full Version.
Raha mahita misredirection raha endri-javatra io dia afaka (Misy vonjimaika nanampy eto fitiliana) Masìna ianao, aoka isika mahalala ny fifandraisana amin'ny alalan'ny endrika.
Toy ny mahazatra, Manantena izahay fa hahazo izany dikan-.
Sal. Raha mampiasa ny dikan-talohan'ny feno sy ny fanavaozana ny vaovao Full Version tsy mampiseho (fanavaozam-baovao ihany ny kinova maimaim-poana) Aza misalasala – hanatsarana ny kinova maimaim-poana voalohany, avy eo dia manaraka avy hatrany amin'ny alalan'ny Hanavao ny Full Version, tsy misy toe-javatra tokony ho very.
Version 1.0.1 – ny gadget, ny alehanao
Jolay 6, 2018 amin'ny tolotra 2 Comments
Io dikan vaovao, vao haingana ny hisaorana, nanome antsika roa endri-javatra vaovao:
Voalohany, ny fahafahana nampiditra gadget avy amin'ny Upload Back (mba ho voafaritra kokoa, wp-content/uploads/transposh/widgets), izany no ho an'ny olona rehetra izay namorona ny azy Widget (fotsiny angamba ny fanovana ny sainam-pirenena) ary nanana olana fanavaozana plugin Widget amin'izao fotoana izao, satria ny fampirimana natao toherina, endri-javatra izany ihany koa ny manokatra ny mety mba hizara amin'ny hafa gadget.
Ny faharoa dia ny endri-javatra koa ny Google “rel = Alternate hreflang” fomba, izay mampiasa ankapobeny mendrika tanteraka URLs isaky ny boky toy izany, fa tsy 'ny URLs, izany dia mampitombo ny habeny ny htmls amin'ny maro (arakaraka ny isan'ny fiteny no manohana, maro fotsiny io isa io noho ny haben'ny adiresy ny toerana ary afaka manampy ny 1k haingana isaky ny fangatahana na inona na inona). Ny amin'izao fotoana izao recommandation fotsiny ny mankarary izany endri-javatra, fa raha te traikefa tsara kokoa ao amin'ny Google ny fitaovana Webmaster, mandeha mialoha sy miala voly.
Manantena izahay fa hahazo izany dikan-, Aza misalasala mba hifandray antsika na inona na inona bibikely / endri-javatra ny fangatahana.
Version 1.0.0 – Tonga ny fotoana
Jona 16, 2018 amin'ny tolotra 4 Comments
Transposh velona no ho farany 10 taona eo ho. Efa foana nitandrina plugin Nohavaozina ny toerana eto, ary niezaka mba hahazoana antoka ny wordpress.org dikan asa.
Araka ny dikan nirona masina ka vao mainka sarotra ny dikan-roa foana. Noho izany ny wordpress.org dikan natao tsirambina.
Izany dia manomboka amin'ny ankehitriny ny fanovana ny famotsorana ny dikan- 1.0.0 amin'ny wordpress.org sy ny Full Version 1.0.0.1, izay no ho fenitra vaovao eto (feno dikan Hamarana fanampiny .1)
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny dikan-?
Ny dika wordpress.org manana 5 teny fetra, ka tsy ahitana na gadget.
Ny Full Version dia manana endri-javatra bebe kokoa, tsy misy fetra fiteny, gadget fanohanana, ary ny Backlinks ho ny toerana (izay ho misafidy ny hanala – vakio ny teny)
Inona koa no vaovao eto amin'ity dikan?
Tena notsapaina amin'ny PHP 7, Tokony hanala annoyances sy ny deprecation manamarika
Source Map fanohanana ho an'ny soratra, mamela ny debug azy mora foana
Ara from FirePHP ho Chromelogger.
No tia mampiasa io dikan-!
Version 0.9.9.2 – Tsy git
Oktobra 5, 2017 amin'ny tolotra 32 Comments
Io dikan naharitra ela ny tao amin'ny fanaovana, na inona na inona loatra fancy eto, fanamboarana for wordpress 4.7 ary ny, fiteny more farany (117!)
Hafa mifanentana fanamboarana sy ny zavatra mahazatra.
Izany fomba naka mihoatra noho izay ilaina, satria tsy maintsy mifamadika ny tontolo iainana avy amin'ny antitra sy trusty svn ny vaovao sy fanantenana git. Izay no tena misavorovoro ny amin'ny fanafahana io. Manantena fa isika dia handefa vaovao miaraka amin'ny dikan-potoana fohy kokoa.
Ankafizo io dikan-.